Al-Shabaab oo qabyaalad u adeegsaday ka hortagga Macawiisley
Ururka argaggixisada ah ee al-Shabaab wuxuu billaabay inuu dadka u kala qeybiyo qaab qabaa’ileed iyadoo dadka ku dhaqan deegaannaada Shabeellaha Dhexe uu ku khasbay inay ka hortagaan ciidammada iskooda isu abaabulay ee Macawiisley.
Maaddaama ciidammada is abaabulay ee Macawiisley ay dagaallada ay la galaan al-Shabaab guul ka gaaraan, wuxuu ururka al-Shabaab door biday inuu qabyaalad u isticmaalo jebinta awoodda Macawiisley.
Xubnaha al-Shabaab ayaa ku khasbeen dadweynaha qaar ee ku dhaqan degmada Xaaji Cali inay ka qeyb galaan bannaanbaxyo lagu cambaareynayo Macawiisley iyadoo ay sheegeen in aysan taageersaneyn ururka Macawiisley.
Waa arrin layaab leh in ururka al-Shabaab oo sheegto inuu yahay urur diinta ku dhaqmo uu qabyaalad u adeegsado la daagaallanka ururka isaga kasoo horjeedo oo dagaal kula jiro.
Waxay taasi caddeyneysaa in ururka xag-jirka ah ee al-Shabaab awooddiisa hoos u dhacday iyo in uusan haysanin taageero siyaasadeed, wuxuuna door-biday inuu adeegsado qabyaalad iyo cabsi-gelin si uu uga hortago mucaaradka.